Kuongorora kweiyo iPhone 7 Plus Jet Dema, iyo yakanakisa iPhone kudhara [Videoreview] | IPhone nhau
Kutaura kuti iyo ichangobva kuburitswa iPhone ndiyo yakanakisa iPhone yakamboburitswa mhere zviri pachena zvekuti zvinoita kunge zvisina basa kutaura nezvazvo, asi Apple yaita zvakanaka kwazvo neiyi iPhone nyowani, kunyanya ne iPhone yako 7 Plus, sezvo iriyo modhi mune mamwe marongero akaunganidzwa achienzaniswa nechizvarwa chakapfuura. Kwemwedzi tanga tichitaura nezve iPhone yaizove yakafanana neiyo yapfuura modhi nekumwe kunatsiridza, nekuti Apple yaizokanda zvimwe zvese mu iPhone 8 gore rinouya. Zvese zvinoita sekunge zvinoratidza kuti iyi iPhone nyowani yaisazove yakakosha, kunyanya kune avo vaitova ne iPhone 6s kana 6s Plus, uye kuti zvaive nani kumirira gore rinouya.
Hapana chingave chinowedzera kubva pachokwadi, iyi nyowani iPhone 7 Plus inomiririra kukwakuka muhunhu mune yega uye yega yehunhu hweiyo inonyanya kufarirwa smartphone munyika. Uye hazvisi nyore kuwana iro gore rimwe nerimwe kukambani inodikanwa kupfuura mamwe ese. Vazhinji vakasiiwa chete nehumwe ruzivo rwekuti hapana headphone jack, izvo zvingaite sekutarisa mota chete nekuda kwekusava nevanotora mukombe pa armrest. Kamera, dhizaini, skrini, bhatiri, bhatani idzva repamba, haptic injini ... uye zvese izvi zvakabatanidzwa neIOS 10 nezvose zvinobvumidzwa kuti zviite neiyi nyowani smartphone. Iwe unoda kuona kuti iyo iPhone 7 Plus Jet Nhema inotaridzika sei? Zvakanaka enda mberi.
1 Dhizaini yekuitarisira, uye kunakirwa nayo
2 Iyo taptic injini, izvo zvidiki zvinhu izvo zvakakosha zvakanyanya
3 Bhatani risiri, tenda kana kwete
4 Kushaikwa kwehephonephone jack, sarudzo isingadzivisike
5 Vatauri veStereo, kugadzirisa asi zvishoma zvimwe
6 Kuramba kwemvura pakupedzisira kunosvika
7 Iyo yakanakisa skrini yeiyo nguva
8 Mamwe masimba uye yakawanda RAM
9 Iyo kamera, shanduko iri pachena kwazvo
10 Zvakakodzera here kuchinja?
Dhizaini yekuitarisira, uye kunakirwa nayo
Pamberi pehurukuro yaive yatove pachena kwandiri kuti yangu modhi yaizovei: yakasviba nhema, piyano nhema kana Jet Nhema, seApple inosarudza kuidaidza. Pfungwa iyi yakasimbiswazve mushure mekuona mharidzo iyo Apple yakatiratidza maitiro akaomarara avakawana nawo kupedzisa kunoshamisa pachigadzirwa chakagadzirwa nealuminium. Ehe, ichokwadi kuti kunyangwe Apple pachayo inotiyambira kuti iyo Jet Nhema yekupedzisa inogona kutambura diki diki-abrasions nekushandisa, asi chiri chinhu icho chaitove nacho kunyangwe isina kuverenga iyo yakanaka kudhindwa. Yangu yekutanga iPhone yaive nhema 3GS, ine glossy nhema yepurasitiki kumashure casing, uye uyu modhi unondiyeuchidza zvakawandisa pamusoro pake kuti apfuure.
Mushure meye nhema iPhone 6 Plus ndakaenda kuchena kune yangu 6s Plus, uye kunyangwe zvisingagone kutaurwa kuti imwe yakanaka kupfuura imwe, kumberi kwechitema kunoshamisira neiyo yakafanana iyo iyo inoratidza neiyo skrini yakadzimwa. Kufanana uku hakuchina kuputswa nemitsetse yeantena iyo mumhando dzapfuura dzakayambuka musana wese wefoni. Kunze kwekudzideredza, Apple mumhando dzayo nhema dzakakwanisa kuita kuti zvisaonekwe. Kunyangwe apuro rinomira mune ino modhi, sekunge Apple yakanga isina kushinga kuputsa dhizaini yakakosha zvakadaro. Iyo iPhone 7 Plus Jet Nhema idiki dete yakasimba yeiyo yakafanana inopenya nhema dema zvisinei kuti unoitarisa kupi., kurapa chaiko kwemaziso.
"Ichakwenya nekungotarisa" kana "Zvigunwe zvako zvese zvichamakwa" mamwe emashoko andakaverenga zvakanyanya kubva pandakafunga kutenga. Izvo hazvinyanyo kundinetsa ini, ini handisi mumwe wevaya vanotenga iyo iPhone kufunga kwekuitengesa uye nekudaro vachitambura neese kukanda iyo inoderedza kukosha kwayo kwemusika. Ini ndinowanzo chengeta zvakanaka zvinhu zvangu, cKufanana neangu Apple Watch Simbi, iyo yavakandiudza zvakafanana nezve, uye gore nehafu gare gare ini ndichiri kunakidzwa nekugadzirwa kwayo kwakanaka uye kupenya kupenya. Zvakadaro, hapana chikonzero chekutya, uye kunyangwe foni yangu yakatochengetedzwa nenyaya yayo (senge dzese dzapfuura), kana tsoka dzacho dzinoiswa nekungobata chete, kana kukwenya nekutarisa.
Iyo taptic injini, izvo zvidiki zvinhu izvo zvakakosha zvakanyanya
Apple payakaburitsa yayo yekutanga iPhone yakashandura zvese: epanyama maibhobhodi angangonyangarika kubva kumafoni efoni, yaive budiriro yakavatendera kuti vave izvo zvavari izvozvi, asi isu takarasikirwa nemanzwiro ekuti kutamba panyama keyboard yakapa. Iyo Taptic Injini kana taptic injini iyo Apple yakaverengerwa mune ino nyowani iPhone 7 inotibatsira isu zvishoma kuti titore iwo manzwiro. Hongu, ichokwadi kuti pane nhare mbozha dzinotetemera paunobata keyboard kana skrini, asi izvi zvakasiyana, zvinonyengera asi panguva imwechete zvakasikwa. Zvakaoma kwazvo kutsanangura zvaunotarisa kana iwe uchidarika nepakati rondedzero yesarudzo mumenu, kana kana iwe uchidhinda bhatani rekutanga.
Apple inogutsikana kuti iyi taptic injini ichave chinhu chakakosha zvekuti yakatoburitsa API yevagadziri kuti vashandise iyo. Ndakaiyedza neAlto's Adventure, mumwe wemitambo yekutanga kushandisa iyi API, uye kuva nekunzwa kuti chimwe chinhu chiri kuitika mumaoko ako chinoshamisa pakutanga, asi unorisuwa kana usina. Zvakandishamisa nekuti ndaifunga kuti chichava chimwe chinhu chakafanana chaizvo nezvatakatove nazvo neiyo iPhone 6s, asi ini ndaive ndakanganisa. Unofanira kuzviedza kuti uzive zvandiri kutaura nezvazvo. Chimwe chinhu chinoita kuti ndinyatso kuziva ndechekuti iyi taptic injini ingashandiswa sei kuvandudza kuwanikwa kwevanhu mapofu, ndinovimba kuti Apple inoishandisa uye haitore nguva kuita kudaro.
Bhatani risiri, tenda kana kwete
Yakabatana zvakanyanya neiyo taptic injini, isu tave kutaura nezve yekutanga bhatani, kana kuti, "hapana bhatani" kutanga, nekuti hapachina bhatani. Apple yakashandisa tekinoroji imwechete iyo yatove nekugona kuvonga kuApple Watch kutanga, ichiteverwa nematrackpads uye iyo iPhone 6s skrini. Kumanikidza Kubata, 3D Kubata, idana izvo zvaunoda, chokwadi ndechekuti bhatani rekutanga chidimbu chegirazi risingafambise iro kana rikamanikidzwa rinopindura, uye kuti inotinyengedza nekuita kuti zviite senge isu tinodzvanya nekutenda kune iyo Taptic Injini.
Sezvinobvumwa, iko kunzwa kunoshamisa pakutanga, asi nekuda kwekuti iwe unogona kudzora kudedera kwaunoita kana uchimanikidza iko kusanzwisisika kuita kwadzikira. Wajaira zvemishini pulsation, Vazhinji vedu tinoshandisa chikamu chepamusoro-soro chekudengenyeka (3) asi ndine chokwadi chekuti mune chinguva ndichazojairira nhanho 2 zvichave zvakatokwana. Hatigone kukanganwa kuti iyo yeminwe yekunzwa iri zvakare iri pasi pebhatani iro, uye rinoshanda sezvakangoita muma6s.
Zviri pachena kuti ndeipi nzira iyo Apple yasarudza kutora, bvisa bhatani repamba, uye iri kutora matanho madiki asi echokwadi kuzadzisa chinangwa chayo, hatizive kana gore rinouya kana rinotevera. Izvo zvinongoda kusvetuka chipingamupinyi chidiki, kuti ubatanidze iyo yeminwe yekunzwa muchiratidziri, asi izvo zvatova zvinogoneka nematekinoroji matsva akaonekwa, saka iyo iPhone isina bhatani repamba inotevera
Kushaikwa kwehephonephone jack, sarudzo isingadzivisike
Tiri kuramba tichikumbira mafoni emafoni zvimwe: skrini ine resolution yepamusoro uye kupenya kwakawanda asi izvo zvinodya zvishoma, processor ine simba uye inoshanda ... asi zvakadaro isu tinoramba tichishandisa chinongedzo chine makore anodarika zana uye vane yekupedzisira shanduko huru (ichideredza saizi yayo) yakaitika anopfuura makore makumi mashanu apfuuraapo vaive vasina kana kurota mbozhanhare. Yakanga iri nguva ingangoita yechinyakare chinongedzo chakanyangarika kubva kune anotevera-chizvarwa michina uye yakatsiviwa nedhijitari chinobatanidza kana isina waya tekinoroji. Kubheja kunoitwa, uye kubheja kuri kuhwina.
Zvakawanda zvakaitwa zvekutadza kubhadharisa iyo iPhone uku uchiteerera mimhanzi ine Mheni mahedhifoni (ini handirangariri ndakambochaja yangu iPhone ndichiteerera nemahedhifoni). Uye pano iwe unofanirwa kupa Apple mbama pachiuno, nekuti kana kubheja kwako kuri pane waya, iwe unofanirwa kunge watobvisa tambo yekuchaja yako iPhone. Zvese zvichauya, asi chinenge chaive chiitiko chakanakisa.
Nezve hunhu hwe odhiyo, ini handisi akakodzera kukodzera kuongorora mahedhifoni nekuti nzeve dzangu hadzisi idzo nhengo dzangu dzepfungwa dzakasimukira kana kudzidziswa zvirinani, asi chokwadi ndechekuti mheni nyowani EarPods inorira zvakangofanana neyechinyakare EarPods, iyo ichatora mukufunga kuti iri dhijitari yekubatanidza ichienzaniswa neiyo analogue yeiyo zvekare, haitaure zvakanyanya kuvatsigira. Zvisinei, ndinosiya kuongororwa kweaya mahedhifoni enzeve dzakadzidza kupfuura dzangu.
Vatauri veStereo, kugadzirisa asi zvishoma zvimwe
Sezvo isu tiri kutaura nezvemimhanzi uye mahedhifoni, hatigone kutadza kutaura chimwe chezvinhu zvitsva zveiyi iPhone, iyo inozopedzisira iine ma speaker maviri anotendera stereo kurira, kunyangwe isina kuenda pamusoro. Imwe yematauri ndiko kwazviri nguva dzose, pazasi, uye imwe yacho chiyeuchidzo chatinoshandisa kuteerera nhare, izvo zvino zvinoita mukuwedzera pakuva mutauri wechipiri.. Iyo stereo mhedzisiro haina kunyatso kufadza sezvo ese maspika ari padhuze kuti aite izvi, uyezve kutarisisa kweumwe neumwe kwakasiyana, izvo zvinokanganisawo
Zviripachena, isu hatigone kuenzanisa ruzha urwu rwe stereo newemumwe mutauri "akazvipira", asi sezvo iyo iPad Pro iine ruzha rwe stereo inogona kunge iri poindi yakanaka yekureva. Nehurombo iyo iPhone 7 Plus haiswedere padhuze nekurira kweiyo iPad Pro, ngazvitaurwe, ine ina vatauri. Ehe, yakagadziridzwa ichienzaniswa neiyo iPhone 6s Plus yandaimbove nayo, ruzha rwune simba uye unogona kufunga kuteerera bhaisikopo pasina kudikanwa kwemahedhifoni kana uri pamubhedha kana podcast paunenge uchigeza, semuenzaniso, asi zvimwe zvishoma.
Kuramba kwemvura pakupedzisira kunosvika
Zvakatora asi pakupedzisira Apple yakafunga kupa smartphone yayo nekudikanwa kwemvura kuramba kutya kushandisa yedu iPhone padhuze nechinhu chemvura. Chero tsaona inosanganisira kunyorovesa yedu iPhone 7 kana 7 Plus haizoperekedzwe nekutyisidzira kwekurwadziwa kwemoyo, nekuti tichaziva kuti hapazove nenjodzi yekukuvara Chero bedzi isu tisingapfuure iyo IP67 yakatarwa, ndokuti 1 mita kudzika kwemaminitsi makumi matatu.
Manonoko? Kune Apple, kuramba kwemvura uku kwauya panguva chaiyo, apo dhizaini yefoni yaibvumidza kuita icho chitupa. Dispense nehedhiyo jack uye nyowani yekutanga bhatani, pamwe neiyo nyowani kamera dhizaini anga ari akakosha zvinhu kuti zviite izvi.. Dzimwe bvunzo dzinotovimbisa kuti inoshora zvirinani kupfuura mamwe mafoni ane chiyeuchidzo chepamusoro, asi hazvina basa: Apple haifukidze chero kukuvara kunokonzerwa nemvura nechivimbiso chayo. Chaizvoizvo hapana chigadzirwa chakafanana nechichi chitupa chinozviita uye tsananguro ndeyekuti "kusagadzikana" uku kune zuva rekupera, nekuti kufamba kwenguva kunogona kukonzera kuti irasike, uye hapana nzira yekuziva kana kukuvara kwakakonzerwa nekuve mumvura kwenguva refu kana kudzika kupfuura zvakaratidzwa.
Iva zvazvingaite, ichi chitupa chinongoshanda chete kune tsaona hapana munhu anorota zvekugona kushandisa yavo iPhone mudziva riri pasi pemvura, nekuda kwekuti iyo skrini haishande. Hongu, pikicha inogona kutorwa uchishandisa mabhatani emuviri, asi ini ndinoomerera, hachisi chinangwa cheichi chitupa.
Iyo yakanakisa skrini yeiyo nguva
Ivo vanhu veDisplaymate vakayera iyo iPhone 7 Plus skrini se "yakanakisa LCD skrini kunze uko nhasi." Hazvishamise nekuti zita iri rakatowanikwa neiyo 9,7-inch iPad Pro uye Apple yakanda zvakasara kuitira kuti iyo iPhone 7 ne7 Plus vanakirwe neiyo yakafanana skrini. Iyo nyowani skrini yeiyo iPhone 7 Plus ine 50% yakawanda kupenya, kunoonekwa kana uchishandiswa mumugwagwa, masikati machena, chimwe chinhu chinokosheswa zvikuru.
Iyo DCI-P3 nzvimbo yemavara, iyo imwe chete inoshandiswa neindasitiri yemufirimu, inoita kuti mavara ave akafanana nehupenyu, echisikigo, uye akapfuma kupfuura pane kumwe kuratidzwa, uye ichiri yakasarira kumashure kweSamsam SuperAMOLED mune mamwe mativi, asi Displaymate pachayo inovimbisa kuti Apple yakadzora musiyano uripo pakati petekinoroji mbiri idzi, uye pane zvimwe zvinhu umo LCD skrini ye iPhone 7 iri nani pane iyo Samsung SuperAMOLED, senge mukururama kwemavara, anooneka akakwana.
Ehe, isu tese tinozvitora sezvisina basa kuti Apple ichachinjira kune AMOLED skrini pane yayo inotevera iPhone, asi nekuda kwezvimwe zvikonzero kunze kwemhando yemufananidzo: kuwedzera simba kwesimba, angles ekuona zvirinani, mukana wekugadzira dzakakomberedzwa skrini, nezvimwe. Musiyano uripo pakati pevatema veiyi LCD skrini uye Samsung SuperAMOLED yatove mashoma, uye inoratidza neziso rakashama.
Mamwe masimba uye yakawanda RAM
Iyo nyowani iPhone 7 Plus chikara chaicho, kunyangwe ichienzaniswa nedzimwe dzazvino makomputa. Iyo nyowani A10 Fusion chip inogadzirwa neTSMC (Samsung haicharatidziki chero kupi) ine ma cores mana uye inogona kushanda ichinyatsoita kana kuwedzera kuita, zvinoenderana nezvinodiwa zvehurongwa. Kune iri rakakura simba tinofanirwa kuwedzera iyo 3GB ye RAM, yakasarudzika kune iyo Plus modhi, uye izvo zvinoonekwa kana zvasvika pamabasa akakosha sekuvhura akati wandei ma tabo muSafari.
Iyo GeekBench inowona iyo inozadzikiswa neiyo iPhone 7 Plus inoshamisa zvechokwadi, yepamusoro kune chero imwe smartphone mumakwikwi, kunyangwe Google Pixel XL yakaratidza mazuva mashoma apfuura. Iyo inodarika iyo MacBook 2016 uye mazhinji mamwe maLaptops azvino, chimwe chinhu chisingafungidzike ne smartphone makore mashoma apfuura.
Iri simba rakakura harirwi neunyanzvi hukuru, kubudirira maererano neApple kusvika pa1 awa kuzvitonga kuzhinji uchienzaniswa neiyo iPhone 6s Plus. Mupfungwa iyi, ini ndichazofanira kumirira kuti ndigadzirise kushandiswa kweiyo iPhone 7 Plus, nekuti zvanyanyokurumidza kutora mhedzisiro uye mashandisiro andiri kuita izvozvi anopfuura zvakanyanya. Parizvino zvandinoona ndezvekuti hapana kana mutsauko uripo pakati pemhando mbiri idzi maererano nekuzvitonga, asi ini ndinoomerera, kwakanyanya kutora mhedzisiro. uye ini ndichafanirwa kumirira vhiki dzinoverengeka kuti ndive nemafungiro akasimba.
Iyo kamera, shanduko iri pachena kwazvo
Isu tinosiya yakasimba point yeiyi iPhone 7 Plus yekupedzisira: kamera yayo. Apple yaida kuti iyi ive yechokwadi protagonist yeApple nyowani smartphone, uye kunyangwe iyo iPhone 7 ichivandudza pachizvarwa chakapfuura iine nani sensor uye Optical stabilizer, ndiyo iyo iPhone 7 Plus iyo inoita mutsauko neayo mbiri kamera uye mbiri mbiri zoom zoom. Iyo yakareba-kona kamera ine aperture f / 1,8 (f / 2,2 yaive neiyo ye iPhone 6s) uye telephoto lens ine aperture f / 2,8 kubvumidza zoom zoom uye iyo Bokeh mhedzisiro, iyo inosvika neinotevera yekuvandudza kune iOS 10.1 .
Ngatiisei technical data padivi, uye taura zvakananga nezve mhedzisiro inoratidza mimwe mienzaniso yakatorwa nemamiriro akasiyana emwenje uye pasina chero mhando yekugadzirisa. Iko shanduko dziri pachena, iine zvirinani mifananidzo kunyanya mune yakaderera mwenje mamiriro uye mukana, kwenguva yekutanga, yekugona kutora mifananidzo ne zoom pasina kurasikirwa nehunhu, hongu, nemamiriro akanaka echiedza.
Vhidhiyo inovandudzwa zvakare paiyo iPhone 7 Plus, uye kugona kurekodha vhidhiyo nexx Optical zoom zvakare kunoita mutsauko kubva kune iyo iPhone 6s Plus, kunyangwe kubva kuiyo iPhone 7. Kusvikira kumavhidhiyo e4K pa30fps inogona kuwanikwa nekamera nyowani iyi, ichiwana mibairo inoshamisa nekuda kweiyo sensor uye optical uye digitaidhi kudzikama.. Hatigone kukanganwa iyo 7 Mpx yekumberi kamera kana iyo nyowani ina-LED Yechokwadi Tone kupenya. Asi iyo iPhone 7 Plus kamera inofanirwa kuongororwa kwakaparadzana, uye isu tichadaro.
Zvakakodzera here kuchinja?
Ndiwo mubvunzo, uye zvinosuruvarisa kuti mhinduro ichafanirwa kupihwa neumwe neumwe. Vazhinji vashandisi havazoone zvakakodzera shanduko maererano neiyo iPhone 6s Plus, kana kunyangwe kubva ku iPhone 6 Plus. Nekudaro, pachave nevamwe vangangoitira kamera vanozoda kukwikwidza kuchizvarwa chitsva. Pachavewo nevaya vanoda kuisa maoko avo pachiratidziri chitsva, bhatani rekutanga nyowani kana idzva rinovaima dema kana matte dema ruvara. Pamwe hapana chimwe chezvinhu zvitsva zveiyi iPhone 7 Plus iri yega inokwana kururamisa shanduko kune vakawanda, asi hazvirambike kuti zvese zvakawedzerwa pamwechete zvinogona kunyatsoita kuti vazhinji vafunge kukwidza chizvarwa chitsva. Sarudzo ndeyako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Ongororo yeiyo iPhone 7 Plus Jet Dema, iyo yakanakisa iPhone kusvika parinhasi [Videoreview]
Izvipe iyo yemukomana ine yepamusoro yekutenderera
Ichokwadi iPhone yakanakisa kunze uko, uye haitsvage nyore sekutaura kwevanhu, ndaenda kuApple Store kunoikwenya nemakiyi kwete kukwenya, kutanga slide ipapo incar, hapana kana chinhu, paive ne jetblack yavakange vakapinza kiyi nekuti aluminium yakanga yakakamurwa.
Kutendeseka dai ndaive nemari ndaitenga, asi ini ndinomirira iyo iPhone 8n
Daniel Perez akadaro
Kuderera kunonoka, urombo ndechekuti hauna kubatwa. Zvisinei
Pindura kuna Daniel Perez
Ah murombo subnornal iyo amai vake vasina kumudzidzisa fundo, kutanga ini ndakazviita nemazvo, ini ndine yangu iPhone 6 isina, chinhu chega icho vanhu vanowedzeredza ndechekuti inokwenya nyore.
Uyezve, ndeechokwadi maPhones ekuyedza, kana iwe ukaona maPhones ese andakaona achiparadzwa uye zvakare vana vanokanda maPhones sekunge vaive matombo patafura, ini ndiri mumwe wevaya vanosiya iPhones munzvimbo dzawo.
PS: enda kuchikoro kuti ikudzidzise iwe dzidzo, zvinonyadzisa sei kuti vanhu vakadai dhongi ...
Ndikati, wakadzikira kwazvo.
Ndiri kumirira kuti vandishevedze zvangu, asi hapana chinhu kwemwedzi miviri, gore rega rega zvakafanana vasina stock asi izvi zvinoita sekunge zvakatoipisisa, kuona kana vakatanga kuzvigadzira zvisati zvaitika kana imwe mhinduro isiri gore rinogara riri, zvakajairika kana paine asi kuwedzera ………….
Chinyorwa chakanakisa ... kunyangwe chaipo pakupera kwevhidhiyo iwe unoti ndiyo iPhone yakave neshanduko dzakanyanya kubva kuchizvarwa chayo chekare ... uye haina kudaro ... Ndiyo yakave chidiki, nekuti vese avo vakachinja kubva kune chimwe chizvarwa kuenda kune chimwe vakave neakakwana dhizaini shanduko… Uye isu tese tinoziva kuti gore rino Apple haina kuzviita kuchengetedza zvese zvinorema zvombo zvegore rinouya… yegumi yemhemberero iPhone… iPhone 10 … Kana pamwe… Iyo Apple Nhare 🙂
Chinyorwa chakanakisa, ini ndaisada iyo iPhone 3 kana 3GS zvakanyanya, asi ndanga ndiine ese aruminiyamu kubva iyo iPhone 2g uye zviripachena magirazi akafanana neana4 ne4, ndine kusahadzika, handina kuiwana pane yangu iPhone 7 Wallpaper inosimudzira iyi iPhone, mumwe munhu angandibatsira here?
Heano unayo: https://www.actualidadiphone.com/descarga-los-fondos-pantalla-del-iphone-7-iphone-7-plus/
Hazvizivikanwe kuti sei vasina kuisirwa kumagumo.
Yakanaka kwazvo zvese kunze kwekushayikwa kwejack
"Nyangwe tsoka dzinomakwa nekungobata chete" ndiani waunoda kunyengedza neichi chirevo? Ehe, chinoratidzwa nekungobata chete, ihwo hutsinye hunoratidzwa makumbo, hunoshandura kunyangwe ruvara. Na iyo nzira, sei iwe uchitenga jet nhema kana iwe uchizoisa chivharo pairi?
Wakamboona vhidhiyo yacho here? Ikoko iwe unoona mabatiro awabata iyo iPhone uye haina kumakwa. Ndiri kufara nesarudzo yako, ini ndichachengeta yangu Jet Nhema, kunyangwe ndikaisa chivharo pairi.
Ndiri kufunga zvekubva kuMatte Nhema kuenda kuJet Nhema… mushure memwedzi miviri… ungandiudza here kana watambura kakakwenya? Ndokumbirawo muve vechokwadi ... (kukwenya munzvimbo yekamera iyo pamwe nenyaya yacho isina kufukurwa, nzvimbo iyoyo, madivi ezasi akafukurwa, nezvimwewo)
FIFA Nhabvu Nhabvu yave kuwanikwa ye iPhone nePadad